Vanyori vanoenda kuruzhinji rwevanhu mugore rino 2017 | Zvazvino Zvinyorwa
Federico García Lorca, Ramón María del Valle-Inclán uye HG Wells.
Pakupedzisira Ndira 1 raive Zuva re Ruzhinji rwevanhundokuti, iyo copyright yevanyori vakawanda vakasununguka. Tinorangarira izvozvo Copyright, Mune mazwi epamutemo, iwo ndiwo kodzero dzevagadziri pamusoro pemabasa avo mabhuku uye unyanzvi. Izvi zvinobva pamabhuku, mumhanzi, pendi, zvivezwa, uye mabhaisikopu kune mapurogiramu emakomputa, dhatabhesi, kushambadza, mepu, uye mifananidzo yehunyanzvi Gore rino pane mazita akati wandei anopinda mune urwu runyorwa.
Kana basa rava zveruzhinji, kodzero dzako dzehupfumi dzinopera uye unogona kuzvishandisa zvakasununguka. Kunyange zvakadaro, kodzero dzetsika dzinochengetwa. Idzi ndidzo dzine chekuita nekuzivikanwa kwekunyora. Ivo vanochengetedza kutendeka kwavo kuitira kuti parege kugadziridzwa kana mamwe mabasa anobuda.
Nyika yega yega ine mitemo yakasiyana pa copyright. KuSpain, iyo Intellectual Property Law ya1987 yakachengetedzwa kusvika 1879. Izwi rakatemwa ndere makumi masere makore "kubva muna Ndira 1 wegore rinotevera kufa kana kuzivisa kwerufu." Iyi poindi ine nharo, kunyanya kumakesi evanyori vakaurayiwa panguva yeHondo Yenyika. Semuenzaniso, Federico García Lorca aive muna 1936, asi kufa kwake hakuna kunyoreswa zviri pamutemo kusvika 1940.
Vanyori vanopinda munzvimbo yeruzhinji
With the mutemo wazvino wa1987 (kunyangwe iri kurarama-ipfupi izvozvi), iro izwi rakaenzana kune dzimwe dzenyika uye rakaiswa pa Makore makumi manomwe panzvimbo yemakumi masere. Saka kubva muna Ndira 1 wegore rino pane mutsva mutsva wevanyori vanopinda munzvimbo yeruzhinji.
Pakati pavo pane zvambotaurwa Lorca, Ramiro de Maeztu, Ramón María del Valle-Inclán, Pedro Munoz Seca kana Miguel de Unamuno, vese vakafa muna 1936 Raibhurari Yenyika atumira runyorwa rurefu nevamwe Mazita makumi mashanu. Yakaisawo chikamu chakanak chebasa revanyori ava uye vanowanikwa pachena pane webhusaiti yayo.
Izvo nezve vanyori veSpanish. Pakati pevanyori vekunze, mazita akadai semunyori uye mudetembi anomira Gertrude stein, munyori, mudetembi nemunyori André Breton, mutambi wechiGerman uye munyori wenhau Gerhart Hauptmann, nhasi akakanganwa mukundi weNobel Prize for Literature muna 1912; uye munyori wenhau weBritish uye munyori wenhoroondo HG Wells, munyori we Iyo nguva Muchina o Hondo Yenyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vanyori vanoenda kuruzhinji rwevanhu mugore rino 2017